The Meltwater Press mgbasa ozi mmekọrịta software-dị ka-a ọrụ na-enyere gị aka iwulitekwu ndepụta mgbasa ozi ezubere iche, na-eji naanị isiokwu ndị odeakụkọ dabeere na isiokwu na ụlọ ọrụ ahụ. Choo ndi odeakụkọ dabara na akụkọ gị dabere na ihe ha dere n'oge gara aga, wee kesaa ozi gị site na email ma ọ bụ site na waya site na otu ikpo okwu. Ngosi: Meltwater bụ onye nkwado nke Martech Zone
Uche mkpọchi (ọrụ akwụ ụgwọ na-ebido na $ 199 kwa ọnwa) na-eduga ngagharị iji kwụsị spam spam site n'itinye ndị odeakụkọ na njikwa igbe ha. Na Muck Rack ọ dị mfe ịchọta ezigbo onye nta akụkọ, hụ ihe ha na-eme ma ọ bụ kpuchie, wee zigara ha ọkwa ha ga-achọ ịhụ.
NewsCertified na-enye usoro mgbasa ozi ụwa na nchekwa data a na-enyocha nke nkwenye, ndị ọkachamara gbara ajụjụ ọnụ na echiche akụkọ nwere ike ịnweta 24/7.
Njikọ Onye nta akụkọ bụ nke m sonyeere n'oge na-adịbeghị anya, mana m hụrụ usoro nke ozi ịntanetị ha na sistemụ ha maka ịzaghachi - dị elu karịa HARO.
Tags: agile pragilepraru aru prbulldog onye nta akụkọchọta ndi oru nta akukochọta ndị nta akụkọonyekwereharonyere onye nta akụkọ akachukwunyerenta akụkọ ndepụtandi oru nta akukomgbasa ozi na twittermgbasa ozi promgbasaozigbazee mmirimuckrackozi ọma gbaarapitchnkọwa ndetuPR NewswireObinnanjikọ nta akụkọndepụta nta akụkọakukochọọ ndị na-ede blọgụchọọ ndị nta akụkọchọọ ndị nta akụkọisi iyiisi